पारसले आफ्नो सम्बन्ध बारे यसो भने – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पारसले आफ्नो सम्बन्ध बारे यसो भने
admin January 13, 2021 January 13, 2021 जीवनशैली, समाचार	0
काठमाडौं । एक जमानामा कपालको चुल्ठो बाटेर होटल- होटलमा मान्छे कुट्दै हिँड्ने पूर्वयुवराज पारस शाहको ह’त्कडी लगाएको तस्वीर प्रकाशित हुँदा धेरैले उनी पारस नै हुन् भनेर पत्याएनन् । झट्ट हेर्दा अफ्रिकातिरको जस्तो देखिने पारसको सकलले धेरैलाई झु’क्यायो, के उनी पारस नै हुन् त ? कतिपयले त यो पारसको तस्वीरै होइन भन्ने दाबीसमेत गरे । ह’त्कडीसहितको तस्वीर प्रकाशित हुँदा पनि धेरैलाई पारस शाहको यस्तो हालतबारे पत्यार लागेन ।
तर, वास्तविकता कसैले नस्वीकारे पनि वास्तविकता नै थियो । पूर्व युवराज पारसलाई यो हालतमा देखेर कतिपयलाई दुख लाग्यो होला, कतिपयलाई रमाइलो पनि लागेको जस्तो देखियो । पूर्वराजा, पूर्वरानी कोमल, औपचारिक पत्नी हिमानी र छोराछोरीले कसरी हेरे होलान् पारसको यस्तो तस्वीर ? मान्छेमा जति पनि रौनक, ओज वा आउँछ, त्यसमा सत्ताको निर्णायक हात हुँदोरहेछ भन्ने कुरा हिजोका युवराज पारस र आजका गँ’ज’डी पारसले स्पष्ट भेद छुट्याइदिएको थियो ।
पारस शाहको हालत यस्तो हुनुमा कसको दोष होला ? यो प्रश्नमा कतिपयले निर्मल निवासलाई अर्थात पारसका पितालाई दोष दिन खोजेका छन् । तर, वास्तविकता भन्ने हो भने पारसको यो नियति हुनुमा अरु कसैको नभएर उनको आफ्नै दोष छ ।
निर्देशनअनुसार गाडी रोकेर चौधरीले कागजपत्र माग्दासम्मको अवस्था सामान्य नै थियो । जब उनले कागजपत्र लिएर अलि पर पुगिन्, पारसले उनीतिरै ताकेर स्पिडमा गाडी चलाए । आइल्यान्ड पार गरिसकेकाले उनलाई गाडीले भेटेन र मात्र उनी जोगिइन् । ‘चालकको नामको ठाउँमा पारस वीर विक्रम शाहदेव लेखेको पढ्नासाथ एकछिन त के गर्ने के गर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘चालक गाडीभित्र रिसले आगो भइसकेका थिए । गाडीभित्रै स्टेयरिङ नजिकै हातले जोडजोडले हानिरहेका थिए ।’
दुई वर्षदेखि थापाथलीमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिँदाको अनुभवले कहाँ बस्दा सुरक्षित होइन्छ भन्ने जानकार थिइन् चौधरी र जोगिइन् तर १८ वर्षअगाडि उनै पारसको सन्काहापनले एक गायक तथा संगीतकारको ज्यान गएको थियो, ठाउँका ठाउँ सडकमा ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
अब नेतृत्व लिनैपर्ने भयो, देशमा राजनीतिक समस्या आयो :”पुर्बराजा ज्ञानेन्द्र
२२ बर्षको कलकलाउँदो उमेरमै मृत्युसँग जुध्दै सन्तु, रुँदै गरिन् सहयोगको अपील
भेट्दा यसरी भक्कानिएका थिए रवि ओड, मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो)